Free Software -- Not free anymore?? - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Free Software -- Not free anymore??
Linux သုံးတဲ့လူအများစုမှာ free software နဲ့ open source နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စွဲလမ်းမှုလေးတွေ ရှိမယ် ထင်တယ်။ တကယ်လို့ Free Software တွေ တကယ်တမ်း Free မပေးတော့ပဲ ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းချလာရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ Linux ကို ဆက်ပြီး support လုပ်မှာလား။
Ubuntu က Linux community ကို App store ပုံစံ Software Center က စမိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ Developers တွေကို Apps တွေ ရောင်းချခွင့် ပြုလာတယ်။ အရင်ကလို Debian ကို software တင်စရာမလို၊ ကိုယ်ပိုင် repo လုပ်စရာမလိုပဲ Canonical က Launchpad မှာ private repo နဲ့ software center က ပေး install လုပ်ခွင့် ပေးခဲ့တယ်။ App Showdown လုပ်ပြီး developers တွေ ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။
ကောင်းတာက Apps / Games တွေ များလာတယ်။ တကယ့်ကို ကောင်းတဲ့ Games, Apps တွေ ထွက်လာတယ်။ မကောင်းတာက $$$ ဖြစ်လာတာပဲ။ Free Software Foundation ရဲ့ နာမည်ကြီး Richard Stallman က Ubuntu ကို spyware ဆိုပြီး ပြောတယ်။ Amazon ကို Dash ထဲ ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ပါ။ Ubuntu က အခု တကယ့် spyware ပုံစံ ဖြစ်တော့မယ် ထင်တယ်။
Free Apps တွေကို Private Launchpad မှာ တင်တဲ့အတွက် သွင်းချင်ရင် Ubuntu One Log In လုပ်ရတယ်။ အရင်ကလို Launchpad Public Repo နဲ့ ယှဉ်ရင် မကောင်းတာ အမှန်ပဲ။
Paid Apps တွေ များလာတယ်။ Software ရေးတဲ့သူတွေ debian ကို summit လုပ်တာရော ရှိသေးရဲ့လား မသိဘူး။ အကုန် Ubuntu software center ထဲ ရောက်လာတယ်။ Software Center Reviews က ၃ လလောက်ကြာတော့ ကြားထဲ့ စိတ်ကုန်ပြီး ထွက်သွားတဲ့ လူ ထည့်မတွက်ရသေးဘူး။
တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲ ၀ယ်သုံးရတာ တန်ပေမဲ့ https://apps.ubuntu.com/cat/applicat...owser-premium/ လိုမျိုး အသုံးမကျတဲ့ Apps တွေကို Software Center မှာ ရောင်းလာတာ စိတ်ညစ်စရာပဲ။ Reviews process ကလဲ လုပ်ထားတာ မကောင်းတော့ တစ်ယောက် 1 star vote ဆို တကယ်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲလဲ အသုံးမကျသလို ဖြစ်သွားရော။ Reviews ကြည့်ပြီး စမ်းဖို့ မရဲလောက်အောင်ပဲ။ နောက် တခြား Platform မှာ Free ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲတွေကို Ubuntu မှာ ရောင်းလာတယ်။ ဥပမာ - RC Mini Racers လိုမျိုးပေါ့။ Stormcloud ppa ကို free ပေးရာက ဖျက်ပလိုက်တယ်။ jkeymagic လိုမျိုးပေါ့။ flareget download manager - free ပေးမယ် ဆိုပြီး browser integration ကို free မပေးတော့ဘူး။ Uber Writer ကို Ubuntu မှာ ပိုက်ဆံနဲ့ ရောင်းတယ်။ Developers တွေလဲ free demo, paid for full version ဖြစ်လာတယ်။ Paid တွေ များလာတယ်။ Kickstarter တွေနဲ့ ပိုက်ဆံ ရှာလာတယ်။ တကယ် Free Software က အဟောင်းပဲ ကျန်တော့တယ်။ အသစ် မထွက် သလောက် ဖြစ်လာ သလိုပဲ။
တကယ်လို့ နောင် ပိုဆိုးလာရင် Linux ဆက်သုံးမှာလား။ ရှိတဲ့ နာမည် သိပ်မရှိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ kernel အသစ်၊ libraries အသစ်တွေနဲ့ ဘယ်သူမှ ဆက်လက် maintain မလုပ်ပဲ သုံးမရတဲ့ apps များ အနေနဲ့ ကျန်ခဲ့မှာလား။ (stormcloud ကို ကြည့်ပြီး စိတ်တိုလာလို့ ရေးသည်)
မျိုးဟန်ထက်, မြင့်မိုရ်, Aung Aung, bagothar85, kyawminkhoung, mgwinhlaing, minthike, tu tu, yelinoo
ပြန်စာ - Free Software -- Not free anymore??
Free software ဆို တဲ. အ ခေါ် အ ဝေါ် က နဲ နဲ confusing ဖြစ် စေ တယ် ပြော ရ မယ်။
သ တိ ပြု မိ တဲ. အ တိုင်း ပဲ $$ အ ကြောင်း လုံး ဝ မ ပါ တာ တွေ့ ရ မှာ ပါ။
Libre Software လို. ခေါ် ဖို. suggestion ပေး ခဲ. တာ တွေ ရှိ တယ် လို. လဲ ဆို တယ်။
GNU founder stallman calls ubuntu spyware
ubuntu က တော့ ရှင်း ရှင်း ပြော ရ ရင် Debian ပေါ် က နေ ခေါင်း ပုံ ဖြတ် တဲ. distro လို. ပဲ ပြော ရ မယ်။ Debian က strict ဖြစ် တယ်။ လုံး ဝ *Free Software* (above definition) မ ဟုတ် တာ တွေ မ ထဲ. ထား ဘူး။
$$0ဖြစ် တိုင်း free software မ ဟုပ် တဲ. အ တွတ် ကို g00gle ပြော တဲ. app မျိုး ကို တော့ Freeware လို. ပဲ ခေါ် ရ မယ် ထင် တယ်။?
Canonical လုပ် နေ တဲ. ပုံ စံ ကို တော့ ကျ နော် က သ ဘော မ ကျ ဘူး။ free software ကို အ ခြေ ခံ ပီး စား ပေါက် ထွင် နေ တယ် မြင် တယ်။ debian ဆို Community Developed distro. fedora ဆို လဲ community distro(backed by RedHat) ပေါင်း ပီး ads ထဲ. တာ တွေ ဘာ တွေ မ လုပ် ပါ ဘူး။
Red Hat, Novell (suse linux), Canonical (Ubuntu) တွေ မှာ support ပေး ပီး commercialize လုပ် တာ တွေ ရှိ ပါ တယ်။
ubuntu ၁ ခု ထဲ က FOSS ကို 'ကိုစား' ပြု တာ မ ဟုပ် ပါ ဘူး။ free software philosophy ကို strict ဖြစ် တဲ. လူ တွေ က တော့ ubuntu က နေ တ ဖြေးဖြေး ရှောင် လာ ကြ မယ် ထင် တယ်။
commercial propriety application တွေ လဲ linux မှာ support(official) တာ ရှိ ပါ တယ်။ MatLab, Unigraphics, LabView, ...
မြင့်မိုရ်, bagothar85, g00gle, minthike, tu tu, yelinoo
Find More Posts by winhlaing
Originally Posted by winhlaing
rar ဖိုင်ကိုဘယ်လိုဖတ်ခြင်တာလဲခင်ဗျာ.. rar ဖိုင်ဆိုတာ ကျောပိုးအိပ်လိုဖိုင်တွေအများကြီးကိုတစ်ခုထဲပေါင်း
ထဲ့တာပါ..ဖိုင်တင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ၄ . ၅ ခါမတင်ရတော့ပဲ လင့်ခ်တစ်ခုနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တာ
Software Engineering နည်းပညာလေးပါ thureinsoe Software များဆိုင်ရာ001-01-2011 06:23 PM